Food Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: အစာ
နေအိမ် > အစာ
ဒါဟာဥရောပအရည်အသွေးကိုဒိန်ခဲများအတွက်အကောင်းဆုံး destination သည်ကြောင်းကိုအလွန်လူသိများတဲ့တကယ်တော့င်. ထိုအခါဒိန်ခဲကိုနှစ်သက်အဖြစ်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းဥရောပပူဇော်ရန်နှင့်တွေ့ဖို့ဘယ်လိုရှိတယ်ကိုအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲဖြစ်သည့်သိလို. Join us as we run through the…
ဘယ်သူမှတကယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပြင်သစ် fries ၏အစစ်အမှန်ပုံပြင်သိတယ်. သူတို့ပြင်သစ်ကနေလာမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကိုတောင်သေချာမဖွစျနိုငျ, မှာအားလုံး. စောင့်, ဘာ?! Yeap, သင်မှန်ကကြားဖူးတယ် – ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ပြင်သစ်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအစားအစာအခိုင်အမာပါပြီ, and they both have stories to…
တစ်ခုခုမယုံနိုင်လောက်အောင်တိတ်တဆိတ်ရထားပြတင်းပေါက်ထဲကငေးရှိပါတယ်အကြောင်းကိုကျေပွန်ရဲ့, သငျသညျမထငျမ? ဒါကြောင့်, ရငျးနှီးလုံခြုံရေး frisks အကြောင်းကိုမေ့လျော့, အရည်အဘို့ရှင်းလင်းစွာ Ziplock အိတ်, သုညရဲ့ privacy နဲ့အိမ်သာ-လျော့နည်း busses. ဒီဇင်ဘာလ၌ရထားထက်ဥရောပစူးစမ်းရန်မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်. ဒီမှာပါ…